लकडाउनले उद्योगीलाई पाठ : अब स्वदेशमै दक्ष कामदार उत्पादन ! - Arthapage
लकडाउनले उद्योगीलाई पाठ : अब स्वदेशमै दक्ष कामदार उत्पादन !
प्रकाशित मितिः July 31, 2020 July 31, 2020
नेपालगन्ज १६ साउन : कोरोना संक्रमण रोक्न लागू गरिएको लकडाउन बेला खुल्न अनुमति पाएका उद्योग समेत राम्रोसंग सन्चालन हुन पाएनन् । यसो हुनुमा अन्यसंगै कामदार अभाव मुख्य कारण थियो । बाँके जस्ता सीमावर्ती जिल्लाका उद्योग,कलकारखाना भारतीय कामदारमा निर्भर छन् ।
यहाँका उद्योगमा कति भारतीय कामदार छन् भन्ने एकिन नभए पनि ठूलो संख्यामा सीमापारीबाट कामदार आउने गरेको कुरा घामझैं छर्लङ्ग छ । सीमा बन्दले ती कामदार नेपाल भित्रिन पाएनन् । जसका कारण उद्योग सन्चालनमा कठिनाई भयो ।
‘धेरैथरी उद्योग लकडाउन खुकुलो हुँदा समेत सन्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण कामदार नहुनु पनि हो ।’– एक उद्योगीले भने,–‘भारतीय कामदारमा निर्भर हुँदाको पीडा भोगिरहेका छौं ।’ अदक्ष कामदार नेपालबाटै आपूर्ती हुने गरेको भए पनि प्राविधिक जनशक्ति भने भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी भन्छन्–‘स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता नदिने कुरै छैन ।
तर सम्पूर्ण मेशिनरी सामान उतैबाट आउने भएकाले त्यसलाई सन्चालन गर्ने जनशक्ति यता तयार हुन सकेका हुँदैन । अनि उतैबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ तर लकडाउनले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनको पाठ सिकाएको उनले बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारसंग आफुहरु हातेमालो गर्न तयार रहेको मन्सुरी बताउँछन् ।
बाँकेमा ठूला उद्योग खुल्नेक्रम बढे पनि स्थानीयवासीले रोजगारी भने पाउन सकेका छैनन्। अधिकांश उद्योगमा भारतीय कामदार कार्यरत छन्।
उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार विसं २०४६ यता बाँकेमा ८८ ठूला उद्योग दर्ता भए। तर, ती उद्योगमा भारतीय कामदारकै बाहुल्य रह्यो। सञ्चालन भइरहेका अधिकांश उद्योग १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कारण धरासायी बन्न पुगे। विसं २०६२र६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जिल्लामा पुनः एकपछि अर्को ठूला उद्योग सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ। एकपछि अर्को ठूला उद्योग खुल्दासमेत यहाँका स्थानीयवासीमा उत्साह देखिएन।
कारण, स्थानीयवासीले स्थापना भएका उद्योगमा रोजगार पाउन नसक्नु नै हो। बाँकेमा सबैभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालनमा रहेको जानकी गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष सुरेश यादव भन्छन् , “हाम्रो वडामा दर्जनौँ उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर पनि स्थानीयवासीले रोजगारी पाउन सकेका छैनन्, धुलो, धुवाँ र प्रदूषण मात्र पाएका छन्।” बाँकेमा सिमेन्ट उद्योग, छड, प्लाष्टिक, फलामजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन्।
ती उद्योगमा अधिकांश कामदार भारतीय छन्। बाँकेमा भारतीय कामदार कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै छैन। श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने र श्रम अडिटको दायरामा आउन नसकेका कारण तथ्याङ्क यकिन हुँदैन। सीमावर्ती भारतीय गाउँका मजदुर त बिहान साइकलमा आएर साँझ घर फर्किहाल्छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै लाखौँ नेपाली विदेश गइरहेका बेला नेपालमा भने यसरी भारतीय कामदार भरिभराउ भएका छन्।
मजदुर नेताले स्वदेशी कामदार राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि उद्योगीले त्यसको बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। उद्योगीका आफ्नै समस्या उद्योग सञ्चालकहरू भने बाध्यताका कारण स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिन नसकेको बताउँछन्। उद्योगी चम्पालाल बोथ्रा भन्छन्, “सकेसम्म आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई काममा लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति नभएकाले बाहिरबाट काममा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।”
ठूला उद्योग मात्र होइन साना तथा घरेलु उद्योगमा समेत भारतीय कामदार निर्भर छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका महासचिव एवं उद्योगी जिआर भुषालले अब स्वदेशमै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘दैनिक हजारौ नेपाली बिदेश गइरहेका बेला हाम्रा उद्योग भने कामदार नपाएर सन्चालन हुन नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ त्यसका लागि आफुहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
प्रदेश नं. ५ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै कामदार उत्पदान गर्ने गरी प्रशिक्षण दिने योजना बनाएको छ । ती योजनाले स्वदेशमै कामदार उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
प्रकाशित मितिः 8:31:00 AM |
Prevघरेलु महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मान, खजुरामा लगानी भित्रा्उने विषयमा छलफल
Nextधेरै कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि राजश्व कार्यालय बन्यो आइसोलेसन सेन्टर